NCH ​​Wavepad Sound Editor 8 Xeerka Diiwaangelinta [Edition Master Crack]
Home » crack & Activators » Wavepad Sound Editor 8 crack
by Anastasiya Libra | February 13, 2018
software Wavepad Sound Editor waa audio iyo music editor xirfadeed for Windows iyo Mac. Free Code Diiwaangelinta Wavepad 2018 waxay ka caawisaa dadka isticmaala si ay u curiyaan tafatirka audio ee ay doortaan gaar ah. Tilmaamo gaar ah ay u noqoto mid hufan in ay ku tiirsanaadaan WavePad editor dhawaaqa. WavePad shaqeeya sida hab ama mp3 editor. Laakiin Free Wavepad Code Diiwaangelinta 2018 sidoo kale taageertaa qaar ka mid ah qaabab kale oo ay ku jiraan file Vox, GSM, WMA, audio Real, TO, AIF, FLAC, OGG, iyo in ka badan.
Wavepad Sound Editor 8 Guudmarka
Free Code Diiwaangelinta Wavepad 2018 qoraan karaan iyo edit music, codka iyo cajalado kale audio. Waxa ay u ogolaataa user halka sixiddiisa files audio in ay jari karaa, nuqul iyo Jinka qaybo ka mid ah cajalado. Ka dib markii tafatir ku dari kartaa saamaynta sida echo, Faahfaahin iyo sanqadh hoos. User ayaa option jeexjeexay edit file haddii iyada oo qalad kasta oo tegey inkastoo hawlgala software tani waa mid aad u fudud.
Wavepad Code Diiwaangelinta 2018 ayaa muuqaalada kala duwan si ay u caawiyaan dadka isticmaala ee tafatirka audio. user The dajiyaan karaa files ka drive adag oo xitaa sidoo kale si toos ah uga CD dajiyaan karaa. Waxaa jira qalab ka dhisay-in ay gubaan wax alla wixii user uu doonayo. user ayaa sidoo kale laftiisa muujiyaan karaa cod joofane. Sida Code Diiwaangelinta Free Wavepad 2018 waxay ka kooban tahay matoor qarsan iyo xitaa qoraal ah in feature matoor hadalka.
Waxaad sidoo kale laga yaabaa in sababta 9.5 crack Torrent
Waxaa jira tabs hoose ee suuqa kala edit in ay si deg deg ah u kala files furan, qalab zoom ah, sidaas darteed waa sahlan in la muujiyo sida saxda ah qayb ka mid user ay doonayaan markii sixiddiisa. suufka Wave Guud ahaan waa ka duwan oo aad u weyn in dhiiran, Heerka-il furan yahay tafatirka file codka.
NCH ​​Wavepad Code Diiwaangelinta Free 2018 Features:
Free Code Diiwaangelinta Wavepad 2018 fududahay in la isticmaalo iyo waxay leeyihiin interface user-saaxiibtinimo.
Hayso qalabka Tafatiridda sida cut, nuqul, Jinka, tirtirto, gelin, aamusay, auto-goo, riixo, shaxdiisa garoonka iyo dheeraad ah.
Waxay leeyihiin saameyn badan Audio ka mid xoojin, caadi, barbaraha, baqshadda, reverb, echo, noqonaynin, iwm.
DirectX iyo Virtual DLL Studio Technology (VST) taageero plugin siin saarayaasha helitaanka kun oo qalab dheeraad ah iyo saamaynta.
Free Code Diiwaangelinta Wavepad 2018 software taageertaa ku dhowaad dhammaan qaabab audio iyo file music mp3 oo ay ku jiraan, GSM, WMA, TO, AIF, FLAC, regelingen, Vox, audio Real, OGG, AAC, M4a, bartamihii, Amr, iyo wax ka badan.
processing Dufcaddii u ogolaanaya dadka isticmaala si aad u dalbato saamaynta iyo dib u habaynta kun oo files sida function hal.
user The xoqin karaa, goobidda iyo bookmark audio for tafatirka saxda ah.
software The abuuri karaan bookmarks iyo gobolada si aad u hesho, yeeran iyo qeybaha kala duwan ee files audio dheer shirin.
qalabka Advanced ka mid ah FFT, Avv hadalka iyo baddali cod.
Waxay leedahay waxyaalo badan dib u soo celinta Audio sida dhimista buuqa iyo guji saarista pop.
editor WavePad Taageerada heerka muunad ka 6 si 192kHz, rikoodh ama Mono, 8, 16, 24 ama 32 gelinno.
Edit audio ka files isticmaala video.
si toos ah ula shaqaysa MixPad Multi-Track Audio fiicni.
← KMSpico 11 Final 2018 Portable Windows iyo Xafiiska Activator CCN 2.3.1 Darawalka Updater dillaac →